Service Supervisor | Easy Ray ﻿
1.7.2019, Full time , Food & Beverages / Catering
Company: Easy Ray
ယခုဆိုလျှင်ဝန်ထမ်း၁၀၀ ကျော်ရှိနှင့်နေခဲ့ပြီးဆိုင်ခွဲပေါင်း၈ဆိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။သည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့နေဖြင့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုပိုမိုတိုးချဲ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။EasyRayသည်၂၀၀၁ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သောစားသောက်ဖွယ်မုန့်မျိုးစုံ နှင့်အအေးမျိုးစုံတို့ကိုစားသုံးသူများထံသို့ ပထမ ဉီးဆုံးသောတည့်ခင်းပေးသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
•	မနက်တိုင်း briefing ခေါ်ရမည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ‘လုပ်ရမည့် ၊မလုပ်ရမည့် အရာများ’၊ ယနေ့ အတွက် မရနိုင် သည့် ဟင်းအမည်များ၊ ပိုရောင်းသင့်သည့် ဟင်းအမယ်များ ( kitchen and F&B)နှင့် ဂျူတီ အဆိုင်းများ ချပေးခြင်း များပြောရမည်။
•	လုပ်ငန်းခွင် သန့် ရှင်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းသုံး items များ သန့်ရှင်းမှု ရှိစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။
•	Server နှင့် bus boy များအား သက်ဆိုင်ရာ စားပွဲ အဆိုင်းများ ချပေးရမည်။
•	၀န်ထမ်းများအားလုံး uniform သပ်ရပ်မှု နှင့် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု ရှိစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။
•	အလုပ်ချိန်အတွင်း ၀န်ထမ်းများဧ။်လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ ကိုဖြည့်ဆည်းပြီး ဟန်ချက်ညီ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
•	လိုအပ်လျှင် supervisor ကိုယ်တိုင် server ကဲ့သို့ အလုပ် လုပ်ပြီး ၀င်ရောက်ကူညီရမည်။
•	S2 ၀င်လာလျှင် Supervisor မှ Headwaiter အား မနက်briefing မှရထားသော သတင်းအချက်အလက်များအား လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
•	အသစ်ဝင်လာသောသူများကို Duty Assign လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
•	Supervisor သည် ဧည့်သည်များ၏ Complaint ကို ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။လိုအပ်လျှင် FOC ပေးခွင့်ရှိသည်။
Work location No. 46, 73rd Street, Between 34th & 35th Streets, Chanayethazan Tsp,Mandalay
Company Industry: Service Supervisor
133 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	အသစ်ဝင်သော Cashierများအား EASY RAY မှသတ်မှတ်ထားသော Cashier JD နှင့် အခြားသိသင့်သိထိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအား သင်ကြားပေးရမည်။ •	Cashierများ၏ လစဉ် Assign Plan များချမှတ်ပေးရမည်။ •	Cashier များ၏ နေ့စဉ်လုပ်ရမည့်တာဝန်များကျေပွန်မှုအ� ...
EasyRayသည်၂၀၀၁ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သောစားသောက်ဖွယ်မုန့်မျိုးစုံ နှင့်အအေးမျိုးစုံတို့ကိုစားသုံးသူများထံသို့ ပထမ ဉီးဆုံးသောတည့်ခင်းပေးသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
•	Able to communicate ideas and thoughts across to others. •	Ability to build Teamwork community. •	Excellent mechanical and operational aptitude.
• Thai Food များကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာချက်ပြုနိုင်ရန် နှင့် အရသာပုံမှန်ထိန်းနိုင်ရန် • Kitchen တစ်ခုလုံးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ထိန်းသိမ်း၍ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မူရှိရန်ထိန်းသိမ်းရန်။ • မိမိ၏ အငယ်ဝ ...
•	အများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိရမည်။ •	စည်းကမ်းရှိစွာ နေထိုင်ပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။
•	မနက်တိုင်း briefing ခေါ်ရမည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ‘လုပ်ရမည့် ၊မလုပ်ရမည့် အရာများ’၊ ယနေ့ အတွက် မရနိုင် သည့် ဟင်းအမည်များ၊ ပိုရောင်းသင့်သည့် ဟင်းအမယ်များ ( kitchen and F&B)နှင့် ဂျူတီ အဆိုင်းများ ချပေးခြင်း များေ ...
•	Take responsibility for entire All outlets and operations and staff performance •	Ability to handle Customer Complaints and queries
• ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ • ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရှည်သောသူဖြစ်ရမည်။ • စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ • နေ၊စား ငြိမ်းစီစဉ်ပေးမည်
•	Team ကို ဦးဆောင်နိုင်ရမည်။ •	ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးရှိရမည်။ •	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု တာဝန်ယူမှုအပေါ်မူတည်၍ လုပ်ခလစာခံစားခွင့်ရှိသည်။ Head Chef (Executive Chef)
•	၀န်ထမ်းအားလုံး၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် စစ်တမ်းကောက်ခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရန် •	၀န်ထမ်းတစ်ဦးခြင်း၏ အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ ကို အမှားအယွင်းမရှိဘဲ လည်းကောင်းတို့၏ ဌာနပြောင်းေ� ...
•	Responsible for checking all assets of company. •	Controlling for admin general expenses. •	Organize meetings,special events and trainings •	Maintain current and accurate inventory of technology hardware, software and resources
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	တစ်လလျှင် နားရက် (၄) ရက် ရရှိမည်။ •	မနက်ဆိုင်း၊ ညဆိုင်း နှစ်ဆိုင်းခွဲ၍ လုပ်ရမည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Must have good personality & communication skills •	Able to work under pressure
•	Able to work asaTeam. •	Good Communication skills
•	Must be highly motivated, self-initiative, good interpersonal skill, self-motivated and professional •	Good Communication skills
•	You are needed to established the service standard and procedures for all service employees in the organization. •	Defining the responsibilities and roles of each Restaurant Supervisor, waiter and helper. •	You are required to supervise all restaurant supervisor day to day. •	You must have the skill of giving training to the employees of service standard and procedure. •	Conceptual skill and ideas of appearance of food & drink and shop decoration •	Able to suggest the new menus. •	Have to develop and control the health ...
134 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Mandalay မြို့လေးတွင်း ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနိုင်ရမည်။ •	ဆိုင်ကယ်ယဉ်မောင်းလိုက်စင် ရှိရမည်။ •	ဆိုင်ကယ်ရှိသူကို ဦးစားပေးပါမည်
• မန္တလေးမြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ် ရမည်။ • မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အခြေခံဗဟုသုတ ရှိရမည် • အလုပ်ချိန်အတွင်းအသောက်အစားကင်းရမည်
•	စားသုံးဖွယ်ရာ များကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးရန်။ •	ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျှဉ်းစည်းကမ်း များအတိုင်း လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု များကိုလုပ်ဆောင် ရမည် Junior F&B (Bartendar)
•	You are required to generate financial report timely. •	You need to manage your subordinate and organize the accounting procedures within the organization. •	General Ledger preparation, year end audit preparation, support of budget and forecast activities. •	Payroll for all employees in every shops, restaurant. •	Monthly reports and tracking all the transaction which are corrected manner. •	Work flows and procedure of the department must be defined and well organized.
Service Supervisor Customer Service & Call Centre jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Easy Ray Customer Service & Call Centre jobs Customer Service & Call Centre jobs Service Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Looking for job in Thandang Apply online at www.jobless.com.mm directly to thousands employers.
Customer Sales & Service F (20)